Muuri News Network » Dhageyso: Weeraradii isqarxinta kadib waa sidee Xaalada Shariif Xasan..
Dhageyso: Weeraradii isqarxinta kadib waa sidee Xaalada Shariif Xasan..
Nov 11, 2015 - Comments off
Afhayeenka Maamulka Gobalka Shabeelada Hoose Max’ed Shiino ayaa Faah faahin ka bixiyay Xaalada Caafmaad ee Madaxweyne Shariif Xasan & Sida u u dhacay Weeraradii ismiidaaminta ahaa ee lala Eegtay Shariif Xasan.
Wuxuu sheegay Afhayeenka maamulka Gobolka Sh/hoose in Qarax koowaad oo ka dhacay deegaanka Carbiska uu waxyeelo u geystay dad Shacabka oo saarnaa Gaari Miino bas ah oo marayay meel aan sidaasi uga ogeyn halka qaraxa uu ku aasnaa.
Waxaana sida uu Afhayeenka xaqiijiyay ku dhintay dad shacabka oo gaarayay ilaa iyo toboneeyay tiro intaasi ka badan ay ku dhaawacmeen.
Sidoo kale,Qaraxa Labaad ayaa ka dhacay deegaanka Calamada oo ka mid ah deegaanada Hoostaga degmada Afgooye Ee gobolka Sh/hoose,inkastoo Qaraxaasi si dhab ah ah loo ogeyn qasaaraha uu geystay.
Ilaa iyo hada ma jirto cid sheegatay mas’uuliyada weerarka,balse ururka Al-shabaab oo ka horjeeda Dowlada ayaa inta badan sheegta mas’uuliyada weeraradani oo kale.
Wafdiga madaxweynaha ayaa Xilligii qaraxyada lala eeganayay waxay ka soo laabteen safar shaqo oo ay ku tageen degmada Afgooye ee gobolka Sh/hoose halkaasina uu madaxweyne Shariif Xasan uu kaga dhawaaqay gudoomiyaha cusub ee gobolka Sh/hoose,gudoomiyihii horana xilka looga qaaday.
Afhayeenka ayaa Xaqiijiyay in Madaxweynaha Maamulka Koonfur galbeed uu badqabo isaga & Wasiiradii la socday islamarkaana uusan wax saameeyn ku yeelan Weerarkii isqarxinta.